Turkiga oo dib u celiyay Markabka sahanka ah Oruc Reis. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Turkiga oo dib u celiyay Markabka sahanka ah Oruc Reis.
Turkiga oo dib u celiyay Markabka sahanka ah Oruc Reis.
Previous articleXoogga dalka oo ku dilay horjoogayaal argagaxiso Gobollada Baay iyo Jubbada dhexe.
Next articleMunaasabad lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee dalxiiska oo lagu qabtay Muqdisho.